Ndị isi ahụike na Gọọmentị UK: Kwụsị ịnọ na ngere COVID
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ Njem UK » Ndị isi ahụike na Gọọmentị UK: Kwụsị ịnọ na ngere COVID
Otu ụlọ ọrụ ahụike Britain nke na-arụ ọrụ n'ofe UK na-enye nyocha COVID-19 nkeonwe maka ndị njem ụgbọ elu, ndị mmadụ onwe ha, na ụlọ ọrụ, akpọwo ndị gọọmentị UK ka ha "kwụsị ịnọdụ na ngere" maka ịga n'ihu mkpọchi na mgbochi njem ụgbọ elu.
Ndị ọkachamara ahụike na-agba PM Boris Johnson ume ka ha debe usoro ụbọchị "siri ike" na "n'ezie" mgbe enwere ike ịmaliteghachi njem ụgbọ elu.
A gaghị ewepụ COVID site na ịgba ọgwụ mgbochi, ya mere, ọ dị mkpa ngwa ngwa ịchọta azịza ogologo oge iji bie ya.
Usoro ihe omumu nke nyocha nke COVID-19 mgbe nile tinyere usoro ogwu ogwu, iyi ihe nkpuchi, na imeghari aka mgbe nile bu isi ihe iji weghachi obi ike na njem ikuku.
Ndị ọkachamara ahụike na-akpọ gọọmentị UK ka ha meghee njem ụgbọ elu nke ụlọ na nke mba ka ha kwenyesiri ike na nchikota ule, ịgba ọgwụ mgbochi, na usoro nchekwa ndị ọzọ nwere ike ime ka ụgbọ elu ụwa na ụlọ ọrụ njem na-agagharị ọzọ. Ha choro ka Gọọmenti Britain nye akara ụbọchị doro anya iji kwe ka ịmaliteghachi njem ụgbọelu zuru oke. Ọ bụ iji kwupụta ọkwa banyere ịmaliteghachi njem ụgbọ elu na ọha Britain na Eprel 12.
Onye nyocha COVID na-eweta Salutaris People na Test Assurance Group (TAG) eguzobela ngwa ngwa PCR ngwa ngwa n'ọdụ ụgbọ elu UK nke nwere ike ibute ule PCR ngwa ngwa na asambodo n'okpuru 3 awa na-enye Fit to Fly, Test to Release, yana 2 - na ule ụbọchị 8. Ebumnuche a wuru ebumnuche, nke ya na Liverpool John Lennon Airport dị na Liverpool, nwere ike ịkwado ule PCR ngwa ngwa yana ụlọ nyocha nke ya na ọdụ ụgbọ elu. Ọ bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu dị na UK nwere ike ime nke a, ma e jiri ya tụnyere ntụgharị elekere 48 maka ule PCR.
Ross Tomkins MD nke Salutaris Ndị mmadụ gbara Prime Minister Boris Johnson na odeakwụkwọ nke State maka Transportgbọ njem Grant Shapps ume ka ha debe usoro ụbọchị "siri ike" na "n'ezie" mgbe enwere ike ịmaliteghachi njem ụgbọ elu nke ụlọ, Europe, na mba ụwa, nke ga-enye ijide n'aka ma weghachite ntụkwasị obi nye ụgbọ elu ụgbọ elu na ndị ọrụ njem.
Tomkins kwenyere na usoro jikọtara ọnụ nke oge niile Nnwale COVID-19 n'akụkụ usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, iyi ihe nkpuchi, na ịsachapụ aka mgbe niile bụ isi ihe na-eme ka mmadụ nweghachi obi ike na njem ụgbọelu. Ọ dọrọ aka na ntị belụsọ na ewepụtara ụbọchị a ga-ewepụta ụbọchị a ga-ekwupụta na Eprel 12 na gọọmentị nwere ike ịdaba UK na akụnụba ụwa n'ụzọ sara mbara karị “ọbụna ná nsogbu akụ̀ na ụba ka nke anyị na-eche ihu ugbu a.”
Ọ dọkwara aka na ntị banyere "oge ọgbụgba oge" nke nsogbu ahụike na nke anụ ahụ nke ga-emetụta ma jupụta omume NHS na usoro nlekọta ahụike onwe onye ruo ọtụtụ iri afọ na-abịa.
“Gọọmentị enweghị ike ịga n'ihu na-eme ihe n'ụzọ a ma nyekwa ndị dị etu ahụ ihe karịrị njem ụgbọ elu. Mkpebi mkpebi gọọmentị na omume gbara gburugburu ịmaliteghachi njem ụgbọelu amachaghị nke ọma na nke kachasị njọ. Anyi choro ubochi doro anya doro anya nke edere iji malite njem ugbo elu. Ekwadoro n'ime atụmatụ ahụ, ọ ga-abụrịrị ihe ngosi doro anya nke na-anwale site na nyocha COVID-19, iyi ihe mkpuchi, ịkpapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ekwenyere m na ọha na eze ga-eji obi ụtọ rube isi n'iwu ndị a ma ọ bụrụ na ọ pụtara na ha nwere ike ịmaliteghachi njem ụgbọ elu, na-enwe oge ezumike na oge ezumike ọzọ. ”
Ọ gara n'ihu: “Ihe ndị dị mfe bụ na UK Plc bụ £ 2 ijeri ụgwọ ugbu a, ụlọ ọrụ na-aga na mgbidi, ndị mmadụ na-efunahụ ọrụ ha. Anyị nwere ụfọdụ nnukwu ụgbọ elu na ụlọ ọrụ njem na ụwa na njedebe nke ida na ndị nwere ike ịpụ azụmaahịa n'abali. Na-enweghị usoro doro anya, nke siri ike na nke doro anya ụbọchị njem ụgbọelu nwere ike ịmaliteghachi ọzọ, ụgbọ elu na ụlọ ọrụ njem agaghị enwe ike ịlanarị.
“Nke a apụtaghị mmetụta dị ịtụnanya COVID nwere na ahụike ọgụgụ isi ọha na eze yana ahụike ya niile. N'ime ọrụ ahụike anyị, anyị ahụla mmụba siri ike na ndị ọrụ na ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na nrụgide, nchekasị, na ọrịa musculoskeletal gụnyere ndị nwere Long COVID. Okwu ndị dị otú ahụ na-emetụta ndụ ha kwa ụbọchị na ikike ha nwere ịrụ ọrụ nke ọma. ”
North Korea Air Koryo na-ekwupụta ịmaliteghachi ụgbọ elu China
Ngosipụta Reed na-ekerịta nka ụwa na Arabian Travel Market